Izinto eziluncedo zamandla omoya: iimpawu, ukusetyenziswa kunye nezinto ezingalunganga | Ukuhlaziywa okuluhlaza
IsiJamani sasePortillo | 15/07/2021 11:00 | Amandla omoya
Amandla omoya abe ngowona mthombo uphambili wokuveliswa kwamandla ukutshintsha imodeli yamandla, ukucoceka nokuzinzileyo. Itekhnoloji ephuculweyo ivumela ezinye iifama zomoya ukuba zivelise umbane ngexabiso eliphantsi njengamalahle okanye izityalo zamandla enyukliya. Alithandabuzeki elokuba amandla esijongene nawo anezibonelelo zawo kunye nezinto ezingalunganga, kodwa eyangaphambili iphumelele ngokuphumelela okungathethekiyo. Kwaye zininzi iingenelo zamandla omoya.
Ngesi sizathu, siza kunikezela eli nqaku ukukuxelela ukuba zeziphi ezona zinto ziluncedo ngamandla omoya kubalulekile kuphuhliso lwamandla eplanethi.
3 Izinto eziluncedo zamandla omoya
3.1 Amandla angapheliyo kwaye athatha indawo encinci
3.2 Ayingcolisi kwaye inexabiso eliphantsi
4 Izibonelelo ezingaphezulu zamandla omoya kunye neengxaki
4.1 Umoya awuqhubeki kwaye amandla awagcini
4.2 Impembelelo yenkangeleko kunye nendalo
Okokuqala kukukwazi ukuba loluphi uhlobo lwamandla. Amandla omoya ngamandla afunyanwa ngumoya. Luhlobo lwamandla e-kinetic aveliswa sisenzo sokuhamba komoya. Singawaguqula la mandla ukuba abe ngamandla ombane ngokusebenzisa iijeneretha. Amandla acocekileyo, ahlaziyekayo kunye nongcoliseko-luncedo anokunceda ukubuyisela amandla aveliswa zizibaso.
Oyena mvelisi mkhulu wamandla omoya kwihlabathi yiMelika, elandelwa yiJamani, China, India ne Spain. KwiLatin America, oyena mvelisi mkhulu yiBrazil. E-Spain, amandla omoya abonelela ngombane olingana namakhaya azizigidi ezili-12, emele i-18% yemfuno yelizwe. Oku kuthetha ukuba uninzi lwamandla aluhlaza abonelelwa ziinkampani zombane zelizwe zivela kwiifama zomoya.
Amandla omoya afumaneka ngokuguqula ukuhamba kweencakuba zomoya ojikelezayo zibe ngamandla ombane. Iinjini yomoya ngumvelisi oqhutywa ngumoya ophephezelayo, kwaye ngaphambili yayingumatshini womoya. Iinjini yomoya inenqaba ende; Inkqubo yokuma ibekwe esiphelweni senqaba, ekupheleni kwayo. Ikhabhinethi isetyenziselwa ukuqhagamshela kwinethiwekhi yombane emazantsi enqaba; Ibhasikithi ejingayo sisakhelo esigcina iinxalenye zoomatshini lokusila kwaye sisebenza njengesiseko seebhleyidi; i-shaft ne-Rotor ziqhutywa phambi kweebhleyidi; Kukho iziqhoboshi, ukuphindaphinda, iijenereyitha kunye neenkqubo zokuhlengahlengisa zombane kwi-nacelle.
Iibhleyidi zidityaniswe ne-Rotor, ethi yona idityaniswe neshafti (ebekwe kwipali yemagnethi), ethumela amandla ojikelezayo kumvelisi. Umvelisi usebenzisa iimagnethi ukuvelisa umbane, ngaloo ndlela uvelisa amandla ombane.
Ifama yomoya ihambisa umbane oveliswa liziko laso lesitishi kwisitishi sokuhambisa kusetyenziswa iintambo, kwaye amandla avelisiweyo anikezelwa kwisitishi sokuhambisa aze adluliselwe kumsebenzisi wokugqibela.
Zininzi izibonelelo zamandla omoya ekuya kufuneka siwahlule ukuze singene kwiinkcukacha ezithe kratya.
Amandla angapheliyo kwaye athatha indawo encinci
Ngumthombo wamandla ahlaziyekayo. Umoya ngumthombo otyebileyo ongapheliyo, oko kuthetha ukuba unokuhlala uthembele kumthombo wamandla wokuqala, oko kuthetha ukuba Akukho mhla wokuphelelwa. Inokusetyenziswa kwiindawo ezininzi kwihlabathi liphela.
Ukuvelisa nokugcina umlinganiselo ofanayo wombane, iifama zomoya zifuna umhlaba ongaphantsi kunee-photovoltaics. Inokubuyiselwa umva, oko kuthetha ukuba indawo ekuhlalwa kuyo ngepaki inokubuyiselwa ngokulula ukuvuselela umhlaba owawukho ngaphambili.
Ayingcolisi kwaye inexabiso eliphantsi
Amandla omoya yenye yemithombo yamandla acocekileyo emva kwamandla elanga. Isizathu soku kukuba ayisiyonkqubo yokutsha ngexesha lokuveliswa kwayo. Ke ngoko, ayivelisi iigesi eziyityhefu okanye inkunkuma eqinileyo. Amandla ombane weinjini yomoya ayafana nomthamo wamandla weekhilogram ezili-1.000 zeoyile.
Ngapha koko, i-injini yomoya ngokwayo inomjikelo wobomi obude kakhulu ngaphambi kokuba isuswe ukuze ilahlwe. Iindleko zomoya ojikeleze iiturbine yomoya ziphantsi kakhulu. Kwiindawo ezinomoya omkhulu, iindleko zekilowatt nganye yemveliso ziphantsi kakhulu. Ngamanye amaxesha, iindleko zemveliso ziyafana namalahle okanye amandla enyukliya.
Izibonelelo ezingaphezulu zamandla omoya kunye neengxaki
Olu hlobo lwamandla luhambelana neminye imisebenzi yezoqoqosho. Ezi ngongoma zibalaseleyo. Umzekelo, imisebenzi yezolimo kunye nemfuyo zihlala ngokuhambelana nemisebenzi yeefama zomoya. Oku kuthetha ukuba ayizukuchaphazela kakubi uqoqosho lwasekhaya, kwaye ivumela iziko ukuba lenze imithombo emitsha yobutyebi ngaphandle kokuphazamisa ukukhula kwemisebenzi yalo yemveli.
Kwelinye icala, njengoko unokulindela, ayizizo zonke izibonelelo zamandla omoya, kodwa kukwakho nezinto ezingalunganga. Makhe sihlalutye nganye nganye:
Umoya awuqhubeki kwaye amandla awagcini
Amandla omoya awathetheki, ngenxa yoko uqikelelo lwemveliso alusoloko luhlangatyezwa, ngakumbi kwizixhobo ezincinci zexeshana. Ukunciphisa umngcipheko, utyalo-mali kula maziko luhlala luhlala ixesha elide, ke ukubalwa kokubuya kwalo kukhuselekile. Oku kusilela kunokuqondwa ngcono ngesiqwenga solwazi esinye: oomatshini bomoya zinokusebenza ngesiqhelo phantsi kweempembelelo ezili-10 ukuya kuma-40 km / h. Ngesantya esisezantsi, amandla awenzi nzuzo, ngelixa kwizantya eziphezulu, ibonisa umngcipheko womzimba kubume.
Ngamandla angenakugcinwa, kodwa kufuneka asetyenziswe kwangoko xa eveliswa. Oku kuthetha ukuba ayinakho ukubonelela ngenye indlela epheleleyo yokusebenzisa ezinye iintlobo zamandla.
Impembelelo yenkangeleko kunye nendalo
Iifama zomoya ezinkulu ezikhulu zinefuthe lomhlaba kwaye zinokubonwa zikude. Ukuphakama komndilili wenqaba / iiturbine ukusuka kwi-50 ukuya kwi-80 yeemitha, kwaye iincakuba ezijikelezayo ziphakanyisiwe iimitha ezingama-40 ezongezelelweyo. Impembelelo entle kubume bembonakalo yomhlaba ngamanye amaxesha ibangela ukungathandeki kubahlali bendawo.
Iifama zomoya zinokuba nefuthe elibi kubomi beentaka, ngakumbi ii-raptors ezisebenza ebusuku. Iziphumo kwiintaka zibangelwa yinto yokuba jikelezisa iincakuba ungahamba ngesantya ukuya ku-70 km / h. Ezi ntaka aziboni ngamehlo iiseyile ngesi santya kwaye zingqubane nazo zibulale.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga noncedo lwamandla omoya kunye nezinye iingxaki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Umoya ovuselelekayo » Amandla omoya » Izinto eziluncedo zamandla omoya